Ogaden News Agency (ONA) – Kulan balaadhan oo maanta dhalinta Ogadeniya isugu timid Dhagaxley (Dhadhaab)
Kulan balaadhan oo maanta dhalinta Ogadeniya isugu timid Dhagaxley (Dhadhaab)
Maanta oo ay taariikhdu kubeegnayd 05-10-12 waxaa xerada dhagaxlay kadhacay shir mihiim ah oo ay kasoo qayb galeen faracyada ururka OYSU ee kahowlgala xeryaha dhadhaab ee dhaca Gobolka woqooyi bari Kenya. Kulankan ayaa ah mid ay isugu yimaadan ururada dhalinyarada ee OYSU Ifo, Xagardheer iyo Dhagaxley.
Kulankan oo ah mid kolba sadexda xero ee dhadhaab ka koobantahay lagu qabto ayaa waxa ay Dhalinta OYSU kasoo saareen fariin ku socota shacabka Somalida Ogadeniya digniino loo dirayo gumeysiga iyo bayaamo kusoo beegmay waqtigiisi.
Cabdi Nasir oo ah Xoghayaha Faraca OYSU ee xerada qaxotiga Dhagaxlay ayaa noo sheegay in muhiimada shirkan aheyd in lagu qiimeyo howlihi faracyada OYSU ee xeryaha qaxootiga ee 6 bilood ee lasoo dhaafay. Qiimeyn kadibna waxa uu Masuulku noo xaqijiyay in lawada meel mariyay qorshihi ururka ee la dajiyay bishii April 2012.
Shirkan waxa uu daba socday shirki dhalinta ee lagu qabtay Dhadhaab 29 April 2012.
Xerada Qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro aad u tiro badan oo kasoo jeeda dhulka Ogadeniya kuwaas oo qax ku yimid xeryahaas waxayna wali dareensanyihiin dhibaatadi gumeysiga ay dhulkooda hooyo kulasoo kulmeen.
Ururka OYSU oo ka duulaya baahida dhalinyaro ee ka jirta Xeryaha qaxootiga waxa dhalinyaradu yeeshaan kulamadan oo kale si ay u helaan saxiib iyo qof ay lawadaagi karaan dareenkooda fikirkooda si markaas ay naftooda uga bad baadiyaan dhibaatoyinka ku habsada dhalinta ku nool dhulka khilaafaadka iyo dhibatoyinku ka jiraan.
kulankan ayaa lagasoo saaray qodobo badan oo dhaxal gal ah oo Dhalinta Ogadeniya ee Xeryaha Qaxotiga ku nool dhan bulsho ahaaned iyo dhan halgameedba wax tar badan keeni dona qodobadaas oo ah qorshaha howl fulineed ee uruka dhalinta 6 bilood ee fooda innaguso heysa.
Faracyada OYSU dhadhaab waxay baaq u jeediyeen bulsha waynta ree ogadenia ee kudhaqan dacalada dunida waxayna ugu baaqeen in ayna beeldaraynin fursada qaaliga ah ee ay maanta haystaan waxayna kacodsadeen in ay laban laabaan taageerada ay halganka u hayaan.
Waxay OYSU dhadhaab canbaareeyeen taliska TPLF iyo ciidamadiisa nacabka ah ee xasuuqa baahsan kawada wadanka ogadenia isla markaana laynaya dadka biri magaydada ah ee aan waxba galabsanin xasuuqa uu gumaysigu ogadenia kawado oo ah mid sida roobkii ugu da’aya xilikasta wadanka waxaana kamid ahaa kuwii ugu badbeeyay kuwii kadhacay qoriille, miirdanbas iyo xarshin.
Waxay sidoo kale OYSU dhadhaab digniin udireen kuwa aan damiirka lahayn ee gumaysiga u’adeega oo ay kutilmaameen in uu dhamaaday wakhti gumaysi loo adeego waxayna uga digeen in ay faraha kala baxaan faldanbiyeedyada ay kujiraan islamarkaana dadkooda iyo dadkooda wax laqaybsadaan.
Waxay ururka dhalinta iyo ardayda ogadenia qaybtooda kahowlgasha dhadhaab hanbalyo iyo bogaadin u jeediyeen CWXO iyo shacabka madaalaha ah ee gudaha ogadenia kahowlgala oo ay kutilmaameen kuwo ay taariikhdu xusidoonto waajibaadkoodiina kasoo baxay waxay sidookale bogaadin u jeediyeen jaaliyaadka JWXO ee dunida kahowlgala oo cadawga kula xisaabtama meelkasta iyo markasta.
Sikastaba ha’ahaatee OYSU dhadhaab oo aas-aas koodu ahaa sanadkii 2011 ayaa waxay wadaan dardar balaadhan oo ay kawadaan guud ahaan xeryaha waxayna maanta marayaan in ay xeryaha kuyeshaan xubno aad utiro badan.
Ugu danbayntii shirka ayaa soo xidhmay 3:00pm waxaana lagu kala dheelmaday isbogaadin iyo farxad.